Core Business Units - DAYU Irrigation Group Co., Ltd.
1. DAYU သုတေသနဌာန
၎င်းတွင် အခြေခံစခန်းသုံးခု၊ ပညာရှင်အလုပ်ရုံနှစ်ခု၊ နည်းပညာမူပိုင်ခွင့် 300 ကျော်နှင့် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် 30 ကျော်တို့ ပါဝင်သည်။
Gansu Design Institute နှင့် Hangzhou Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Institute အပါအဝင်၊ ဒီဇိုင်နာ 400 သည် သုံးစွဲသူများအား ရေကိုချွေတာသော ဆည်မြောင်းနှင့် ရေထိန်းသိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ပြည့်စုံသော အလုံးစုံဒီဇိုင်းပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
3. DAYU အင်ဂျင်နီယာဌာန
၎င်းတွင် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်မှုအတွက် အထွေထွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပထမတန်းစား အရည်အချင်းများရှိသည်။စက်မှုကွင်းဆက်အင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်ရန် အလုံးစုံစီမံချက်နှင့် ပရောဂျက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးပရောဂျက်မန်နေဂျာ 500 ကျော်ရှိသည်။
4. DAYU နိုင်ငံတကာ
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော DAYU ဆည်မြောင်းအဖွဲ့၏ အလွန်အရေးကြီးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။"တစ်လမ်းတည်း၊ တစ်လမ်း" မူဝါဒကို အနီးကပ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အယူအဆသစ်ဖြင့် DAYU သည် DAYU အမေရိကန်နည်းပညာစင်တာ၊ DAYU အစ္စရေးဌာနခွဲနှင့် DAYU Israel ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာတို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
5. DAYU ပတ်ဝန်းကျင်
ကျေးလက်အိမ်တွင်း မိလ္လာကို ကုသရေး၊ သာယာလှပသော ကျေးရွာများ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ရေကို ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
6. DAYU ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
ရေကိုချွေတာသောပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ၁၁ ခုရှိသည်။Tianjin စက်ရုံသည် အဓိကနှင့် အကြီးဆုံးအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည်။၎င်းတွင် အဆင့်မြင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ခေတ်မီသော ထုတ်လုပ်မှု စက်ကိရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ ရှိသည်။
အမျိုးသားရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလတ်ဖော်ပြမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်ကို ဦးဆောင်ရန် ကုမ္ပဏီအတွက် အရေးကြီးသော ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။DAYU Smart Water သည် ရေလှောင်ကန်၊ ချန်နယ်၊ ပိုက်လိုင်းစသဖြင့် Skynet control earth net ကဲ့သို့သော " earth net" ကို ဖြည့်စွက်ပေးသည့် "Skynet" ဟု အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုံးဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
8. DAYU မြို့တော်
အကြီးတန်းကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စုစည်းထားပြီး ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေ နှစ်ခုအပါအဝင် ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.7 ဘီလီယံကို စီမံခန့်ခွဲကာ တစ်ခုမှာ ယူနန်ပြည်နယ်၏ စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ ရန်ပုံငွေနှင့် အခြားတစ်ခုမှာ Gansu ပြည်နယ်၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ DAYU ၏ ရေချွေတာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကအင်ဂျင်။